u-Phangiso no-Pretorius bahlanganisa ukunqoba nge-bonus-point kwi-SA ‘A’
u-Aaron Phangiso no-Dwaine Pretorius bathathe ama-wicket ayisikhombisa phakathi kwabo, bahlela ukunqoba ngama-wicket amabili kwiqembu lama-Powerade South Africa A bedlala ne-India A kumdlalo wokuqala we-One-Day Triangular Series, okubalwa khona i-Afghanistan, e-Groenkloof Oval ePitoli ngoLwesithathu. Iqembu lasekhaya linqobe umdlalo kwasala amabhola angu-74, okubaphe i-bonus point ukunezelela ekunqobeni.
u-Phangiso uthathe ama-wicket amane ngama-runs angu-30 kwi-spell sakhe sama-over angu-10 okubalwa khona ama-maiden amabili, kwathi u-Pretorius wathola futhi walingana ngo-3/24 njengoba izivakashi zifike ku-152 emuva kokucelwa ukuthi baphose kuqala.
u-Beuran Hendricks (2/15) uvulele iqembu lasekhaya, wathatha ama-wicket amabili nge-over yakhe yokuqala, wakhipha u-Sanju Samson no-Shreyas Iyer ngo-7 no-0. u-Phangiso no-Pretorius bakhiphe abadlali abaphakathi nendawo nabasemsileni, bangalivumela iqembu langaphandle ukuthi likhululeke.
Abathole ama-runs amaningi, u-Manish Pandey (55 off 95 balls) no-Karun Nair (25 off 39) bafike nenkani, bahlanganisa i-partnership yama-runs angu-42 nge-wicket yesithathu ngaphambi kokuthi baphazanyiswe u-Pretorius okhiphe u-Nair nge-lbw ngokuqala kwe-over yesi-14. U-Yuzvendra Chahal udlale kancane ngasekugcineni kwe-innings, wathola ama-runs angu-24 engaphumile emabholeni angu-49 njengoba abanye adlala nabo bavele baphuma nje.
u-Henry Davids (1/4) uqede i-innings, wathatha i-wicket yokugcina ka-Mohammed Siraj (8), okubone izivakashi ziphuma zonke kuma-overs angu-37.4.
i-South Africa iqale ngendlela ecishe ifane nezivakashi. Kuphume u-Davids no-Dane Paterson ngo-5 no-11, kwabashiya bethathazela ku-16/2 nge-over yesithathu. Ukuqala kahle kuka-Heinrich Klaasen (24) nokapteni, u-Khaya Zondo (15) bazimise kahle izinto kancane ngaphambi kwe-partnership yama-runs angu-62 nge-wicket yesithupha phakathi kwe-Man of the Match, u-Pretorius (38 off 54) no-Farhaan Behardien (37* off 62) kubabeke endleleni yokuyonqoba.
u-Chahal we-India uphose kahle, wathola u-3/41 kwathi u-Axar Patel wafaka isandla wathola u-2/35.
i-South Africa izobe ibheke ukuqhubeka nokunqoba uma ibhekana ne-Afghanistan A e-Assupol Tuks Oval ngeSonto, 30 July. i-India izodlala ne-Afghanistan ngoLwesihlanu enkundleni efanayo.